Hedong Yonggunsa, Tempolin'i Yonggungsa - Busan
Adiresy: 86, Yonggung-gil, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan
Phone: + 82-51-722-7744, 7755
Hedon Engunga dia miorina eo amoron-dranomasina any avaratra atsinanan'i Busan . Zava-mahadomelina izany raha tsy naorina teo an- tendrombohitra ny tempoly fa teo amoron-dranomasina. Хэдон Енгунса dia tempolin'ny Buddhist, naorina tamin'ny taona 1376. Voalohany dia nantsoina hoe Bomun izy io. Nandritra ny tantara lava be, nopotehina, novolavolaina ary novana ny fananganana. Ny teny filamatry ny tempoly dia hoe: "Ho fara-fahakeliny ny iray amin'ireo fanirianao dia ho tanteraka eto ianao noho ireo vavaka tso-piainanao."
Ny maha-olom-boafidin'ny famoronana ny tempoly
Ny tranonay dia nanorina ny moanina Naong. Tao amin'ny firenena dia nisy ny hain-tany sy ny tsy fahampian-tsakafo, ny olona nijaly noho ny hanoanana ary nanome tsiny an'Andriamanitra noho izany. Indray mandeha dia nisy andriamanitry ny ranomasina iray niseho tao Naongu ary nilaza fa raha manorina tempoly eo amin'ny sisin'ny Tendrombohitra Bongrae ny olona ary mivavaka any, dia ho sambatra ireo olana rehetra. Nanangana tempoly ny moine ary nantsoiny hoe Bomun. Ity teny ity dia midika hoe hery tsy manam-petra sy tsy voafetra amin'ny andriamanitry ny famindram-po.
Nanomboka teo, nisy moanina maro samihafa nijanona teo amin'ny toeran'i Hedon Yengunsa. Indray maka tamin'ny taompolo 80 tamin'ny taon-dasa, ny moanina Jungam dia nivavaka mba hamerenana amin'ny laoniny ny seminera. Nivavaka nandritra ny 100 andro ny vavaka nataony, ary niseho tao anaty akanjo fotsy ny andriamanibavitry ny famindram-po, nipetraka teo amin'ny lamosin'ny dragona izy. Taorian'io toe-javatra io, ny tempoly dia nantsoina hoe Hedon Yengunsa, izay midika hoe "tempolin'ny lapan'i Bouddha an-dranomasina".
Tsikaritry ny olona fa tanteraka tokoa ny faniriany rehefa avy nitsidika ny tempoly, ary noho izany finoana izany dia maro no tonga eto.
Famaritana ny tempoly
Hedon Yengunsa - iray amin'ireo mpitarika teo amin'ny toeran'i Busan. Tsy dia lehibe loatra izany, fa misy zavatra maro mahaliana. Alohan'ny hidirana ireo mpitsidika dia ahitana sarivongana mampiseho ny famantarana ny Zodiac. Azonao atao ny mijery ny pagoda, izay mitondra vintana tsara eny an-dalana.
Dia mitarika ny tohatra. Izy io dia misy dingana 108 - asehon'izy ireo ny faniriana olombelona, ​​izay tokony hohadinoinao rehefa mitsidika ny tempoly ianao. Eo amin'ny lalana dia ny alitara sy ny endriky ny Bouddha volamena eo amin'ny sisin'ny vatolampy.
Raha mandeha amin'ny làlana hafa ianao, dia afaka mankany amin'ny tempoly amin'ny alalan'ny tetezana. Ny tetezana dia midika fa fiovana avy amin'ny fiainana tsotra mankany amin'ny faritra misy an'i Bouddha.
Ao amin'ny tempoly dia misy:
olom-boafidin'ny olona masina;
sarivongan'i Buddha - ilay olo-masindahy mpiambina.
Misy statuettes moine maro ao amin'ny faritry ny tempolin'i Hedon Yenguns. Izy ireo dia nentin'ireo olona izay manatanteraka ny faniriany. Betsaka ny mpitsidika tonga eto amin'ny Taombaovao. Miezaka haingana izy ireo hitodika any amin'ilay Andriamanibavin'ny famindram-po amin'ny fangatahany. Tamin'ny taom-baovao dia ny fomba nentim-paharazana teo am-piandohan'ny andro hanoratanao ny fanirianao amin'ny takelaka varahina.
Ilaina mankany amin'ny metro metro Haeundae akaiky indrindra eo amin'ny laharana No. 2 (fivoahana ny laharana faha-7), ary alao ny bus 181 ary mandeha mankany Yonggungsa. Afaka mandeha an-tongotra na amin'ny taxi avy any ambanin'ny tany mankany amin'ny tempoly.
Tempolin'i Tian Hou
Mofomamy amin'ny yogourt
Ny fahaverezan'ny weight by Dyukan
Ny atsinanana atsinanana ao anatiny - ny sasantsasany amin'ny endriky ny tontolon'ny oriental
Manova ny nify ve ny saka?
Reese Witherspoon nankalaza ny faha-41 taonany tamin'ny zanany sy ireo namany akaiky
Denny Rose - Lohataona 2014
Bobovnik - fambolena sy fiahiana, toro-hevitra mahasoa ho an'ny mpamboly
Acrylic volo ho an'ny fantsika - ahoana no fampiasana?
Rindrina brikana fotsy
Ny firoboroboana fanao amin'ny fararano-ririnina 2017-2018 - inona no ho lamaody amin'ny vanim-potoana vaovao?
Takelaka roa tonta
Fandefasana sarimihetsika ho an'ny fanaka